Nanampy trotraka ny hetsika manohitra ny tribonaly miaramila ny fampiantsoana ilay Bilaogera Ejiptiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2019 4:23 GMT
Sarin'i Alaa Abd El Fattah avy amin'ny personaldemocracy ao amin'ny Flickr (CC-BY-SA-2.0)
Tamin'ny alatsinainy, nampahafantarina i Alaa Abd El Fattah, bilaogera Ejiptiana malaza sady mpikatroka nogadraina tamin'ny taona 2006 teo ambany fitondran'i Mubarak fa nampanantsoin'ny mpampanoa lalàna miaramila izy. Raha nandrasana hiatrika ny mpampanoa lalàna izy ny andro nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy, dia nahemotra ho amin'ny alahady manaraka io ny fampiantsoana azy, rehefa tafaverina avy any Etazonia, toerana handraisany fitenenana amin'ny valandresaka momba ny teknolojia sy ny zon'olombelona izy. Araka ny sioka iray, miahiahy izy fa mety ho voampanga ho nanao fitarihana herisetra sy famotehana fananam-bahoaka izy.
Araka ny voalazan'i Al Masry Al Youm, nisy bilaogera an-dahatsary iray nilaza fa manana porofo hanenjehina an'i Alaa izay mampiseho azy mitoraka vato tamin'ny 9 Oktobra ary manizingizina fa nandrisika herisetra nandritra ny famonoana ireo kristianina kopta (kristianina any Ejypta) nitranga tamin'io andro io ity bilaogera ity. Tsy ahitana porofo manohana izany filazana izany ny lahatsary, navoaka tao amin'ny YouTube. Mifanohitra amin'izany, nanambara i Al Masry Al Youm fa ahitana an'i Alaa manampy ireo naratra taorian'ny fihetsiketsehana tamin'ny 9 Oktobra izany.
Nitatitra ny zava-misy ihany koa ny New York Times, ka nilaza fa “tsy manahy” ny rain'i Alaa manoloana ny zanany lahy hiatrika fanadihadiana ataon'ny mpampanoa lalàna miaramila. “
Niresaka tamin'ny Valan-dresaka momba ny zon'olombelona tao Silicon Valley, ao San Francisco (izay nomanina talohan'ny nahafantarana ny famotopotorana azy) tamin'ny Talata i Alaa, izay nanatrika ny fivorian'ny bilaogera Arabo fahatelo vao haingana tao Tunis koa, nilaza momba ny raharaha mikasika ilay bilaogera nogadraina Maikel Nabil Sanad ary namerina indray ny fitakiana hampitsahatra ny tribonaly miaramila any Ejipta:
Omeo 30 segondra aho hiampanga ny fitsarana tsy mahazatra. Hiatrika izany aho rehefa miverina any Ejipta, eo anoloan'ny governemanta miaramila. Tokony ho zatra amin'ny fitsarana tsy mahazatra ianao any, toy ny natao tany Guantanamo. Misy sivily 12.000 eo ho eo any amin'ny fonjan'ny miaramila amin'izao fotoana izao, noho ny fandraisana anjara tamin'ny revolisiona izay heverin'ny miaramila fa nandraisany anjara, ary indraindray amin'ny hetsika izay nanaovan'ny miaramila heloka bevava, fa tsy ny sivily. Mandrisika anareo aho mba hitady fomba hanohanana izay rehetra miatrika ity hoavy ity.
Hatramin'ny 28 janoary, sivily maherin'ny 12 000 no efa notsarain'ny tribonaly miaramila tany Ejipta. Fanentanana tsy mitsaha-mitombo no mitaky fampitsaharana ny tribonaly miaramila, mamerina ny filazan'i Alaa momba ny fitsarana tsy mahazatra. Niloa-bava nanohitra ireo fihetsiky ny Vaomiera Faratampon'ny Tafika ireo vondrona iraisampirenena toy ny Human Rights Watch, milaza fa ny fanenjehana atao dia mampiseho fa “manohintohina ny fiampitàna mankany amin'ny demaokrasia ny miaramila mpitondra ao Ejipta.” Nanamarika ny Christian Science Monitor fa “tsy nisy na dia fanenjehana iray aza tamin'ny tranga fanararaotana na fampijaliana nataon'ny miaramila tamin'ity taona ity kanefa nampanantena hanao fanadihadiana ny tafika.”
Eo ambany fitondran'ny SCAF, tsy zo ny fahalalaham-pitenenana, milaza momba ireo aina marobe teo ambany fitondran'ny Mubarak. Tamin'ny volana jolay, nohadihadiana noho ny sioka iray i Asmaa Mahfouz, raha nogadraina nanomboka tamin'ny volana Aprily kosa ilay bilaogera Maikel Nabil Sanad ary nitokona tsy hihinan-kanina nanomboka ny volana Aogositra.
Nangataka tamin'ireo manohana azy i Alaa mba hijoro hanohitra ny tribonaly miaramila any Ejipta :